Chromebook inononoka, nyore kushandisa, uye makomputa asingadhuri akagadzirirwa kushandiswa kwezuva nezuva uye zviitiko zveInternet senge kubhurawuza, email, kunyora mameseji, Youtube, Netflix, kutamba mitambo, uye zvaunoda.
Sarudzo zhinji dzinotangira pasi pemadhora mazana matatu mazuva ano uye pamari irworwo unowana komputa inoshanda zvakakwana inokwanisa kubata zviitwa zvataurwa pamusoro, izvo zvinoita kuti iwo asingadhuri Chromebook ave akanaka kune vana, vadzidzi, uye akanaka chero ani zvake anoda zvakapusa. uye inodhura komputa yekushandisa kwekutanga. Ivo zvakare vanogara kwemaawa pane chaji, tanga mumasekondi, uye usanonoka sezvavanokwegura.
Panguva imwecheteyo, avo venyu vari kutsvaga zvigadzirwa zvakagadzirwa zvakanaka, akakwidziridzwa emhando yepamusoro, akakwenenzverwa makiyibhodhi, snappier multitasking performance, hupenyu hwakareba hwebhatiri, uye zvimwe zvinhu zvemazuva ano zvinoda kushandisa zvishoma, uye musika unopa zvakawanda zvingasarudzwa izvi mazuva, ayo anofanirwa kuteedzera kunyangwe vanotora kupfuura vatengi.
Takatarisa nekuenzanisa mazhinji eanowanikwa maChannelbook pano paUltrabookreview.com, uye mune ino posvo, isu tinobatsira kudzikisira sarudzo dzako kumidziyo ingangokwana zvaunoda uye bhajeti, zvichibva pazvinhu zvavo, mapoinzi akasimba, uye quirks. Nekuda kwako, isu takakamura chinyorwa kuita zvikamu zvikuru zvitatu:
Budget Chromebook (kutengesa pasi pemadhora mazana matatu);
Kukosha sarudzo ($ 300 kusvika $ 500);
Premium Chromebook ($ 500 +).
Imwezve misoro-kumusoro, zvakadaro. Tisati tatanga kutaura nezvekurudziro chaiyo, ndinoda kuti uve nechokwadi chekuti Chromebook ndiyo sarudzo chaiyo kwauri, saka ita chokwadi chekutarisa yangu yakadzama Chromebook yekutenga gwara kutanga.
Yakanakisa bhajeti Chromebooks (pasi pe $ 300)
Kune akatiwandei emakwikwi Chromebook anotengesa pasi pemadhora mazana matatu mazuva ano, achigadzirira akanakisa maChbookbook evana, shamwari dzinodhura dzekufamba, kana kungoenda kune avo vako pabhajeti shoma.
Pasi pazasi iwe unowana yakadzama rondedzero yesarudzo iwe yaunofanira kufunga mukirasi ino, uye isu tinowana mune zvakadzama pane edu kurudziro mushure.
Ramba uchifunga kuti isu tangosanganisa izvo zvazvino zvigadzirwa izvo zvirikuenderana nezvanhasi zvinodiwa mune urwu runyorwa. Iwe uchiri kuwana zvimwe zvingasarudzwa muzvitoro futi, ekare maChbookbook uye mazhinji acho ari kutengesa madhora mashoma se200 (tevera iyi link kune rumwe ruzivo), asi ini ndinokurudzira kutambanudza bhajeti yako yeimwe yeiyi kana zvichibvira, sezvo iwo akakurisa kukwidziridzwa maererano nedesheni, maficha, uye kunyanya maitiro avanoita nekushandisa kwemazuva ese, sezvo izvi zvakavakirwa pane zvakagadziridzwa Hardware mapuratifomu.
Fomati, yakagadzirwa ne mutengo Screen Hardware uremu bhatiri
Acer Chromebook 314 Clamshell, chikamu chesimbi ~ $ 230 14 ″ HD / FHD IPS matte Celeron Braswell kana Apollo Lake / 4-8 GB RAM / 32-64 GB eMMC 3.4 LBS 45 Wh
Acer Chromebook 315 Clamshell, plastiki ~ $ 259 15.6, HD TN kana FHD IPS matte Celeron Gemini Nyanza kana AMD R4 / 4 GB RAM / 32-64 GB eMMC 3.3 LBS 8+ h
Acer Chromebook Spin 311/511
Inoshanduka, plastiki ~ $ 270 11.6 ″ HD IPS kubata, EMR peni Celeron Apollo Nyanza / 4 GB RAM / 32 GB eMMC 2.9 LBS 10 h
Asus Chromebook C202 Clamshell, mapurasitiki epurasitiki ~ $ 300 11.6 ″ HD TN matte Celeron Braswell / 4 GB RAM / 16 GB eMMC 2.5 LBS 38 Wh
Asus Chromebook C423 Clamshell, plastiki ~ $ 300 14.0, HD / FHD TN matte kana kubata Celeron Apollo Nyanza / 4 GB RAM / 32-64 GB eMMC 2.65 LBS 38 Wh
Asus Chromebook C523 Clamshell, plastiki ~ $ 280 15.6, HD / FHD TN matte kana kubata Celeron Apollo Nyanza / 4 GB RAM / 32-64 GB eMMC 3.1 LBS 38 Wh
dell Chromebook 11 Clamshell, plastiki ~ $ 250 11.6, HD TN matte / kubata Pentium Apollo Nyanza / 4 GB RAM / 32-64 GB eMMC 2.9 LBS 42 Wh
HP Chromebook 11 Clamshell, plastiki ~ $ 250 11.6 ″ HD IPS matte / kubata Mediatek / 4-8 GB RAM / 16-64 GB eMMC 2.4 LBS 44 Wh
HP Chromebook 14 Clamshell, plastiki ~ $ 220 14 ″ HD IPS matte / FHD kubata Celeron Gemini Nyanza kana AMD R4 / 4-8 GB RAM / 16-64 GB eMMC 3.4 LBS 47 Wh
Lenovo Chromebook duet piritsi, kunyanya simbi ~ $ 240 10.1, 16:10 FHD + IPS kubata MediaTek / 4 GB RAM / 64 GB SSD 2 LBS 27 Wh
Lenovo Chromebook 3 Clamshell, plastiki ~ $ 230 11.6 ″ HD TN matte Celeron Apollo Nyanza / 4 GB RAM / 32-64 GB eMMC 2.5 LBS 42 Wh
Lenovo Chromebook S330 Clamshell, plastiki ~ $ 250 14.0 ″ HD IPS matte MediaTek / 4 GB RAM / 32-64 GB eMMC 2.5 LBS 42 Wh
Lenovo Chromebook C340 (Flex 11) Inoshanduka, plastiki ~ $ 300 11.6 ″ HD IPS kubata Celeron Gemini Nyanza / 4 GB RAM / 32-64 GB eMMC 2.6 LBS 42 Wh
Samsung Chromebook 4 Clamshell, plastiki ~ $ 250 11.6 ″ HD IPS matte Celeron Gemini Nyanza / 4-6 GB RAM / 32 GB eMMC 2.6 LBS 39 Wh
Mhando dzakakosha chaizvo padanho iri, sekunge kunyangwe iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchikwanisa kuita Kuchengeta zvinhu zviri nyore, ini ndinokurudzira kutora mudziyo une ingangoita Intel Apollo Lake processor (kana AMD / Mediatek yakaenzana), ingangoita 4 GB ye RAM, uye 32 GB yekuchengetedza (kunyanya 64+ GB).
Hardware padivi, gara uchifunga kuti mazhinji esarudzo muchikamu ichi achiri epurasitiki akagadzira clamshell Chromebook ane matte skrini uye TN mapaneru, asiri-backlit makhibhodi, uye avhareji kuvaka mhando. Kune zvimwe zvisarudzika izvo zvakagadzirwa zvishoma nesimbi, zvinosanganisira IPS skrini kana kunyangwe yekugunzva, uye ndizvo zvandaizotarisa mukati mazvo.
Zvino, sekutaura kwedu chaiko kuenda muchikamu chino, pane imwe sarudzo inotsika-pamberi pevamwe, uye ndiyo Lenovo Chromebook duet.
Kutanga pazasi pemadhora mazana maviri nemakumi mashanu, ino piritsi rakagadzirwa nesimbi uye risingaremi ine yakanaka inoshamisa 250: 16 FHD + yegirazi rekubata, ine peni rutsigiro. Uyezve, keyboard-folio inosanganisirwa nekutadza, kwekushandisa-laptop, uye iyo MediaTek Hardware chikuva inokwanisa zvakakwana kushandiswa kwezuva nezuva uye kumwe kuita kwakawanda.
Nekudaro, ramba uchifunga kuti iyo Chromebook Duet ingori chi-10-inch chishandiso uye inosunga bhatiri diki semhedzisiro, asi inogona kuramba iine maawa matanhatu + ekushandisa zuva nezuva uye 6+ yevhidhiyo. Chekupedzisira, iyo Duet haisi nyore kuwana mudura mazuva ano, uye hazvishamise kufunga kukosha kusingaenzanisike kwauri kuwana pano. Kana iwe wakanaka nezvakadai diki Chromebook, enda nazvo, hapana imwe nzira iri nani muchikamu chino.
Kune rimwe divi, kana iwe uchitsvaga chishandiso chine hombe skrini kana bhatiri hombe, kana kuti zvimwe sarudza yechinyakare laptop fomu-chinhu chingaite kuti komputa ive nyore kushandisa pamakumbo, Dell, HP, Lenovo, uye kunyanya Asus inopa dzimwe nzira dzisingadhuri uye dzakavakwa zvakaomarara, asi mazhinji acho aine TN skrini. Lenovo's Chromebook C340 kana iyo Acer Spin 11 tengesa zvishoma, asi chinja TN matte pani nechinoshandurwa 360-degree IPS touchscreens, chimwe chinhu chandingafarire kubhadhara.
Sezvo isu tichikwira kumusoro muhukuru, kupihwa kukuru kweChannelbook ine 14-inch skrini inotanga neinodhura HP Chromebook 14, Acer Chromebook C314 kana Lenovo Chromebook S330, uye inokwira kune inotakurika Asus C423. Chekupedzisira, vese Asus naAcer vachiri kupa 15-inch Chromebook mumutengo wemutengo uyu, kana zviri izvo zvauri kutevera, asi urikubayira kutakurika kwechiratidziro chakakura.
Pakazara, ini ndinokurudzira kuti uongorore zvakadzama wongororo yeimwe neiyi kana uchida rudzi urwu rwechinhu chakakura-fomati, asi ini zvirinani kukuraira iwe kuti ukwire kune unotevera mutengo-chikamu cheasarudzo dzakagadzirwa zvirinani nemhando yepamusoro. skrini uye nekukurumidza Hardware.
Mamwe ma Chromebook anodhura
Iwo akanakisa-kukosha Chromebook ($ 300 kusvika $ 500)
Sezvo ndashandisa akawanda emaC Chromebook aripo, ndine chokwadi chekuti unogona kuwana kukosha kuri nani kwemari yako muchikamu chemutengo, kunyanya kana iwe uri mushure mekombuta yakatenderedzwa ine pakati nepakati 12 kusvika 14-inch kuratidza. Iwe hausi kungowana sikuru yakakura uye yakavandudzwa pane izvi sarudzo, asi zvakare yakawedzera uye yakasununguka keyboard, bhatiri rakakura, mamwe madoko, pamwe nekunatsiridza kuvaka-mhando.
Kutanga kubva, sezvakangoita muchikamu chakapfuura, heino runyorwa rwakadzama rwemaChannelbook anofanirwa kutariswa muchikamu chino seazvino, uye tiri kupinda mune rumwe ruzivo pasi pazasi.
Acer Chromebook 514 Clamshell, yese simbi ~ $ 350 14, FHD IPS inobata matte Celeron kana Pentium Apollo Lake / 4-8 GB RAM / 32-64 GB eMMC 3.3 LBS 56 Wh
Acer Chromebook 715 Clamshell, yese simbi ~ $ 499 15.6, FHD IPS inobata matte Zvikuru U / 8 GB RAM / 64 GB-128 eMMC 3.9 LBS 56 Wh
Acer Chromebook R13 Inoshanduka, zvishoma simbi ~ $ 350 13.5, FHD kubata Mediatek / 4 GB RAM / 32 GB eMMC 3.3 LBS 54 Wh
Acer Chromebook Spin 15 convertible ~ $ 399 15.6 ″ FHD IPS kubata Pentium Apollo Nyanza / 4 GB RAM / 32-64 GB eMMC 3.8 LBS 54 Wh
Asus Chromebook C425 Clamshell, zvishoma simbi ~ $ 350 14.0, FHD IPS matte kana kubata C0re Y / 8 GB RAM / 32-128 GB eMMC 2.8 LBS 48 Wh
Asus Chromebook Flip C214 Inoshanduka, yakashata mapurasitiki ~ $ 400 11.6 ″ HD IPS kubata, EMR peni Pentium Apollo Nyanza / 4 GB RAM / 32 GB eMMC 2.6 LBS 46 Wh
Asus Chromebook Flip C433 Inoshanduka, zvishoma simbi ~ $ 500 14 ″ FHD IPS kubata Zvekare Y / 4-8 GB RAM / 64-128 GB eMMC 3.2 LBS 48 Wh
Dell Inspiron 11 2-in-1 Chromebook Inoshanduka, plastiki $399 11.6 ″ HD WVA kubata Celeron Apollo Nyanza / 4 GB RAM / 32 GB eMMC 3.1 LBS 42 Wh
dell Chromebook 14 Clamshell, plastiki $329 14.0, FHD TN matte Pentium Apollo Nyanza / 4-8 GB RAM / 32-64 GB eMMC 3.5 LBS 42 Wh
Google Pixel Slate Hwendefa, aluminium $449 12.3 ″ FHD ++ 3: 2 IPS kubata, EMR peni Zvekare Y / 8-16 GB RAM / 128-512 GB SSD 1.6 lb 47 Wh
HP Chromebook 15 Clamshell, kunyanya simbi ~ $ 500 15.6 ″ HD IPS matte / FHD kubata Pentium Goridhe kana Core U / 4 GB RAM / 64-128 GB eMMC 4 LBS 60 Wh
HP Chromebook x360 12 Inoshandurwa, yese simbi ~ $ 350 12, HD + 3: 2 IPS kubata Pentium Apollo Lake kana Goridhe / 4-8 GB RAM / 32-64 GB eMMC 3 LBS 40 Wh
HP Chromebook x360 14 Inoshandurwa, yese simbi ~ $ 380 14 ″ FHD IPS kubata Pentium Goridhe kana Core U / 4-8 GB RAM / 64-128 GB eMMC 3.7 LBS 47 Wh
Lenovo Chromebook 300e / 500e Inoshanduka, plastiki ~ $ 400 11.6 ″ HD IPS kubata, EMR peni Mediatek kana Gemini Lake / 4-8 GB RAM / 32-64 GB eMMC 3 LBS 42 Wh
Lenovo Chromebook Flex 5 13 Inoshandurwa, yese simbi ~ $ 410 13.3 ″ FHD IPS kubata Zvikuru U / 4 GB RAM / 64 GB SSD 3 LBS 51 Wh
Samsung Chromebook 4+ Clamshell, plastiki ~ $ 400 15.6, FHD TN matte Celeron Gemini Nyanza / 4-6 GB RAM / 16-32 GB eMMC 3.8 LBS 39 Wh
Inoshanduka, kazhinji simbi ~ $ 500 12.2 ″ IPS FHD 16: 10 kubata Celeron Y / 4 GB RAM / 32 GB eMMC 2.95 LBS 39 Wh
Pakupera kunotakurika, iyo Samsung Chromebook Plus uye kunyanya iyo Google Pixel Slate kumira-kubva muboka revanhu, vese gumi nemaviri-inch inoshanduka.
The Pixel Slate inonyanya kuve piritsi, nekudaro rakakura pakushandisa piritsi / peni, asi pamwe kwete seyakajairika sepombi. Yakagadzirwa kwazvo, inowana yakanakisa 3: 2 touchscreen, pamwe neanokwanisa Intel Core Hardware uye bhatiri hombe rinotendera maawa gumi nemana ekushandisa zuva nezuva. Chiitiko chekutaipa hachisi pa-par pamwe nezvimwe zvingasarudzwa mumutengo wemitengo iyi, zvakadaro, uye dhizaini rebhodi kana peni hazvina kubatanidzwa nekukanganisa uye zvinoda kuita madhora zana nemakumi mashanu pamusoro petafura chaiyo, iyo yega inogona kukwana kunangidzira mazhinji ako kune chimwe chinhu.
The Samsung Chromebook Plus v2, kune rimwe divi, iri 2-in-1 inoshandurwa uye inosanganisira iyo keyboard nekusarudzika kwe $ 500. Iyo inouya ne16: 10 yegirazi rekubata nepeni rutsigiro, asi haina kana kunge ine simba kana seisina kureruka seSlate, saka kazhinji sarudzo kune avo vanokoshesa rudzi urwu rwekuratidzira uye fomu-chinhu pamusoro pezvimwe zvinhu, zvakaita sehupenyu hwebhatiri. kana kuita. Uye kunyangwe kana zviri izvo zvauri kutevera, chimwe chinhu senge chinodhura HP Chromebook x360 12 inogona kukodzera zvirinani zvaunoda pane iyo Samsung modhi.
Nesarudzo diki idzi dziri munzira, kurudziro yangu huru mumutengo wemhando iyi inoenda zvakare kuLenovo Chromebook, iyo yakanakisa Flex 5 13. Pa $ 409 MSRP, pasina accounting yezvingave zvidzikiso, iyi laptop inobaya pamusoro pekirasi uye inobudirira kupokana nezvakawanda zvezvinhu zvinodhura.
Iyo yekuvaka chikamu chesimbi uye chikamu chepurasitiki, zvakanyanya senge ne Windows-akavakirwa IdeaPads, fomati yacho inobvumidza iyo skrini kuti ishandure kuenda ku360-degrees, Lenovo yakagonesa yakanaka-yepamusoro IPS yekudzivirira skrini ine 300-nits yekupenya uye nemavara akanaka, uye backlit keyboard ndeimwe yeanowanikwa zvirinani pane chero Chromebook.
Pamusoro peizvi, iyo Core i3 chikuva inokwenenzvera zvakakwana kushandiswa kwezuva nezuva, iyo 51Wh bhatiri inovimbisa 10+ h yehupenyu pakubhadharisa, uye kunyangwe kana vamwe venyu vangakoshesa imwe ndangariro uye nzvimbo yekuchengetera, 4 GB ichiri kukwana vazhinji vangangove vatengi pane Chromebook.
Pazasi poindi, chokwadi, iwe unogona kuwana yakawanda yakanatswa maChannel kana iwe uchida kushandisa $ 600 +, asi paanenge madhora mazana mana, hapana chinhu kunze uko chingafanane neFlex 400 panguva ino.
Kusvetukira mumamirioni gumi nemasere, iyo Acer Chromebook 514 (clamshell) uye iyo HP Chromebook x360 14 (inoshandurwa) ndidzo dzandinofarira sarudzo muchikamu chemutengo, uye zvese zviri zviviri zvinodhura kupfuura iyo Lenovo Flex 5. Simbi inoshandiswa zvachose pakuvaka kwavo, uye iyo Acer modhi inopa zvishoma zvine simba maspec uye bhatiri hombe. Iwe hausi kuzokanganisa chero cheizvi.
Chekupedzisira, kirasi iyi inosanganisira yakazara-saizi 15-inch Chromebook ine IPS skrini, zvishoma simbi yekuvaka, uye mabhatiri mahombe, kutanga kubva pasarudzo dzinodhura dzakadai seinoshandurwa Acer Chromebook Spin 15, uye nzira yese kusvika ku HP Chromebook 15. I ndichataurawo nezve Asus Chromebook C523 uye Samsung Chromebook 4+ 15-incher iyo inotengesa zvishoma, asi iwe unozopedzisira uine akawanda epurasitiki anovaka uye TN skrini neaya, saka ndoda kushandisa mari yangu kumwe kunhu.
Kukosha Clamshell Chromebooks
Nepo vatengi vazhinji vasingashandise madhora mazana matanhatu kusvika paUS $ 600 pane Chromebook, pane zviripo zvirinani zvishandiso zviripo muchikamu chino. Naizvozvi, urikutora chiitiko chisina kugadzikana cheCbookbook, nemusanganiswa wezvivakwa zvakagadziridzwa, zvinoratidzwa, uye zvigadzirwa zvehardware pamusoro pechero zvipi zvingadhura zvingasarudzwa.
Heino rondedzero yeese ekutanga maChromebook anowanikwa seazvino, uye isu tinowana zvakadzika-pasi pasi.
Acer Chromebook 714 Clamshell, yese simbi ~ $ 600 14, FHD IPS inobata matte Zvikuru U / 8 GB RAM / 64-128 GB eMMC 3.3 LBS 56 Wh
Acer Chromebook Spin 713 Inoshandurwa, yese simbi ~ $ 560 13.5 ″ FHD + 3: 2 IPS kubata, EMR peni Zvikuru U / 8-16 GB RAM / 64-128 GB eMMC 3.2 LBS 54 Wh
Asus Chromebook Flip C436 Inoshandurwa, yese simbi ~ $ 700 14 ″ FHD IPS kubata Zvikuru U / 8-16 GB RAM / 128-512 GB SSD 2.4 LBS 42 Wh
Asus Chromebook Flip C434 Inoshandurwa, yese simbi ~ $ 540 14 ″ FHD IPS kubata Zvekare Y / 4-8 GB RAM / 64-128 GB eMMC 3.2 LBS 48 Wh
Dell Inspiron 14 2-in-1 Chromebook Inoshandurwa, chikamu chesimbi $599 14 ″ FHD IPS kubata Zvikuru U / 4-8 GB RAM / 128+ GB eMMC 3.7 LBS 56 Wh
Google Pixelbook Inoshanduka, magnesium $899 12.3 ″ FHD ++ 3: 2 IPS kubata, EMR peni Zvekare Y / 8-16 GB RAM / 128-512 GB SSD 2.5 lb 41 Wh
Google Pixelbook Enda Clamshell, magnesium $649 13.3, FHD 16: 9 IPS kubata Zvekare Y / 8-16 GB RAM / 128-512 GB SSD 2.3 lb 48 Wh
Lenovo Yoga C630 Chromebook Inoshandurwa, yese simbi ~ $ 800 15.6 ″ FHD / UHD IPS kubata, EMR peni Core U / 4-8 GB RAM / 64-128 GB eMMC 4.2 LBS 56 Wh
Inoshandurwa, yese simbi ~ $ 900 13.3, UHD AMOLED kubata, EMR peni Zvikuru U / 4-8 GB RAM / 128-512 GB SSD 2.2 LBS 49 Wh
Kune chikamu chikuru, iyo Acer Chromebook Spin 713 uye Google Pixelbook Go ndiwo akanakisa-akaenzana ekutanga maChannelbook iwe aunogona kuwana mazuva ano.
The Pixelbook Enda ndiko kunonoka-2019 kuwedzera kumhuri yePixel. Iyo haina kutsiva iyo inoshandurwa Pixelbook, pachinzvimbo, iyo yakagadzirirwa kutengesa padivi payo, seyakajairwa clamshell kabhuku ine 16: 9 FHD yekubata skrini, yakagadziridzwa Hardware, yakareruka magnesium shell, punchy matauri, uye hwakavandudza hupenyu hwebhatiri, ndatenda kune bhatiri hombe mukati uye nekuwedzera kuratidza. Iyo Go ndeimwe yeakanakisa typers muchikamu chino, uye zvakare $ 150- $ 200 inodhura kupfuura yakafanana inofungidzirwa Pixelbook Go, zvese izvi zvichiita kuti ive yekumanikidza kupihwa.
Haisi iyo inoshandurwa, zvakadaro, uye yakavakirwa pane inoshanda Intel Core Y Hardware, saka kwete nekukurumidza senge dzimwe sarudzo.
The Acer Chromebook Spin 13, kune rimwe divi, inoshandurwa uye yechokwadi imwe nzira kune yekutanga Pixelbook, asi iine mazvino mazvino.
Iyo inowana 13.5-inch inoshandurwa inotsiviwa FHD + yekubata inobata ine 3: 2 factor ratio uye yakavakirwa-mukati EMR peni, ichangoburwa yeCore U Hardware, SSD yekuchengetedza, uye backlit keyboard, kutanga panosvika madhora 559 panguva ino yekuvandudza. Uye izvo ndezvekusa-kusagadzikana kweCore i5 kumisikidzwa ne8 GB yekumusoro uye 128 GB yeSDD yekuchengetedza kunze kwebhokisi, yakatsigirwa nebhatiri re54Wh, iyo yekugadzira-yakatarisana 3: 2 kuratidza uye zvakanaka zvigadzirwa. Mukururamisira kwese, zvakadaro, zvigadzirwa ndeimwe chinhu apo Acer inogona kuwedzera kuvandudza iyi modhi, padivi peiyo odhiyo mhando.
Zvese izvi zvinogadzira iyo Chromebook Spin 713 imwe yeakanakisa kuita maCbookbook kunze uko uye yakasarudzika sarudzo kune vanorema vashandisi uye avo vanofarira kumhanyisa Linux pachigadzirwa chakadai.
Iye zvino, hapana kana eiri maviri ndiyo yekutanga Chromebook, zita razvino rakabviswa ne Samsung Galaxy Chromebook.
Iyi inoshandurwa futi, iine 13.3-inch 16: 9 inoratidzira, asi inowana punchy 4K AMOLED pani ine anoshamisa mavara (100% DCI-P3), kupenya, uye matema nhanho.
Izvi padivi, iyo yekuvaka mhando uye hunyanzvi zvese zviri zviviri A ++, nesimbi inoshandiswa kwese chassis, uye yakanyanya compact uye inotakurika fomati inorema 2.2 lbs. Izvi zvinoita kuti Galaxy Chromebook ive yakasununguka kushandisa mumodi yepiritsi pakuenzanisa nemamwe maChbookbook, iine iyo chete Pixelbook iri kuswedera padhuze. Muchokwadi, iyo yekutanga Pixelbook ndiyo yega imwe Chromebook iyo inogona kuzvitutumadza kumira padyo neiyi Samsung sarudzo maererano nedhizaini, kuvaka, uye kunyange zvigadzirwa, asi haisisiri inoenderana nezvazvino zviyero kana zvasvika pakushanda, bhatiri hupenyu, skrini, uye peni-rutsigiro, iyo iyo Galaxy aces
Kutaura nezve, iyo Samsung Galaxy Chromebook yakavakirwa pane Intel Core U Hardware, iine 8 GB yekurangarira uye nekukurumidza (kukwidziridzwa) NVMe kuchengetedza. Izvi hazvife zvakadzipwa kana kubatika nezvose zvauchakanda pairi, kunyangwe iyo skrini yepamusoro 4K resolution. Iko hakuna i7 kana 16 GB RAM sarudzo, asi handifunge kuti vazhinji vanozoida zvakadaro. Seye parutivi noti, izvi zvakango nyoroveswa, zvinova zvinobatsira kune rumwe ruoko, asi zvakare zvinokonzeresa kuti laptop irambe yakaringana kudziya kupfuura mamwe maChbookbook ane akafanana ma specs, ayo ari fan-akatonhorera.
Zvakanaka, saka sei isiri iyo iyo Chrome Chromebook iri yepamusoro-kurudziro mukirasi ino? Zvakanaka, imo nekuti hupenyu hwebhatiri hauna kunaka pano. Iko kune 49 Wh bhatiri mukati, asi nechiratidziro chine simba-nzara, hupenyu hwebhatiri hupfupi pane zvaunowanzo tarisira kubva kuChbookbook, ingangoita maawa 4-6 chete uchibhadharisa. Pamusoro peizvozvo, odhiyo yemhando zvakare iri yepakati pane iyi Galaxy, iyo yakabatana nemutengo wepamusoro-tag, inoisundira kunzvimbo yechitatu kuseri kwevamwe vaviri vambotaurwa.
Zvese izvi parutivi, izvo zvako zvinotsvaga zvakanyanya zvine simba Chromebook yakavakirwa paCore U Hardware, sedzimwe nzira dzinogona kuitwa dzeAcer Chromebook Spin 713, inofanirwa zvakare kufunga nezve mamwe mashoma ma14-inch sarudzo dzinowanikwa kunze uko, seye clamshell Acer Chromebook 714 kana chinoshandurwa Asus Chromebook Flip C436 uye Dell Inspiron 14 2-mu-1, Imwe neimwe iine yavo yakasarudzika, zvayakanakira, uye quirks.
Chekupedzisira, avo venyu vanofarira yakazara-saizi 15-inch premium Chromebook vanofanirwa kunge vachiri kutarisa iyo Lenovo Yoga C630 Chromebook.
Iyo komputa yakaomarara yakagadzirirwa iyo inokwereta kubva kune dhizaini uye inovaka ques yeLenovo's ThinkPad mitsara, iine 15.6-inch touchscreen inowanikwa neine FHD kana UHD pani uye EMR peni rutsigiro, Core U Hardware, inosvika ku8 GB ye RAM, uye 128 GB yeMMC yekuchengetera, pamwe nekiyi backlit keyboard uye 56 Wh bhatiri.
Iyo Yoga Chromebook inotanga pa $ 599, asi usakanganwe kuti kunyangwe kana ichi chiine compact uye yakareruka ye15-inch inoshandurwa, iine bezels diki uye huremu hwakazara hwe4.2 lbs, haisati iri kwese kwese padhuze nekutakurika sevamwe veimwe sarudzo Kunze Uko.
Iyo 15-inch Yoga Chromebook
Chromebook dzauya nenzira refu mumakore achangopfuura, uye mazuva ano kupihwa kwacho kwakasiyana kuti uwane zvese zvinodiwa. Vazhinji vanopedza yakawanda yenguva yavo online, uye kwavari, Chromebook inzira inomanikidza uye isingadhuri, senzira iri nyore, yakachengeteka uye yakapusa pane iripo Windows malaptop.
Iye zvino, vangangoita vatengi vanogona kusarudza sarudzo isingadhuri pasi pe $ 300, kana kuwana imwe yemapoptop epakati nepakati aine akakwirira anovaka uye masikirini, mashandiro anoita snappier, hupenyu hwakareba hwebhatiri, uye uchiri kukosha kwakanyanya.
Iwo maprimiyamu sarudzo, kune rimwe divi, ndeyekuomarara kutengesa, asi zvinogona kuve zvine musoro kune vese vashandisi vasingafarire mune zvakati Windows software kana mitambo, uye vangatoda kuwana yakapusa uye isinganetsi komputa ine yakanakisa skrini uye iyo yekuvaka mhando uye hupenyu hwebhatiri ivo vangadai vasina kupinda mumutengo wakafanana. Windows Device.
Iko hakuna kukwana Chromebook, asi zvishandiso zvishoma zvinopa yakawanda kune iyo mari
Pakupera kwezuva, maChannelbook anogadzirira shamwari huru dzekufamba, malaptop asingadhuri echikoro uye kunyangwe mabhuku ezvemazuva ese kune avo vanonamatira kuzviitiko zveInternet senge kubhurawuza, kutumira tsamba, multimedia uye zvichingodaro. Ivo havasi vevanhu vese, asi sekureba sekunge iwe uchiziva yavo yakasimba-mapoinzi uye zvausingakwanise, ini ndinotarisira kuti uchaguma wagutsikana neimwe yeiyi.
Ndozvazviri izvozvi. Ndiri kugara ndichivandudza rondedzero iyi yeakanakisisa maC Chromebook anowanikwa kunze uko, ndichiwedzera zvishandiso zvitsva pavanenge vachipinda muzvitoro uye vachidzosera mhando dzakasarudzika, saka ita shuwa yekumaka izvi uye uzvitarise nguva nenguva nekuchinja. Chekupedzisira asi chisiri chidiki, govana ichi kutumira kana iwe ukaona chichibatsira uye kutarisa chikamu chemashoko pazasi, chakavhurika mazano ako nemibvunzo, uye ndiri pedyo nekupindura uye kukubatsira iwe kuwana yakanakira Chromebook yezvaunoda.
The post Akanakisa Chromebook e2020 - enzaniso, ongororo uye gwaro rekutenga akazviratidza kutanga pane UltrabookReview.com
Rondedzero izere yeIntel KabyLake-R (8th chizvarwa) inotakurika malaptop uye ultrabooks